बच्चाले खान मानेन, के गर्ने? :: डा विनिता जोशी :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
बच्चाले खान मानेन, के गर्ने?
डा विनिता जोशी आइतबार, फागुन ९, २०७७, ०९:००:००
बालबालिकाहरुलाई ठोस खाना दिनको तीनदेखि चारपटक खान दिनु उपयुक्त हुन्छ। जति उमेर बढ्दै गयो। त्यसरी नै ठूलो मानिसहरुको झै अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक फलफूल, मासु(मासु नखानेले सोयाविन या च्याउ जस्ता प्रोटिनयुक्त खाना दिनुपर्छ। त्यसले उनीहरुको शरिर वृद्धिका लागि आवश्यक तत्वको आपूर्ति गर्छ।
-(डा जोशी बालरोग विशेषज्ञ हुन्)